यस्तो छि, आजको राशिफल ! हेरेर दिन शुभ बनाउनुहोस - Sudurpaschim Online
यस्तो छि, आजको राशिफल ! हेरेर दिन शुभ बनाउनुहोस
by सुदूरपश्चिम अनलाइन February 2, 2021
मानसम्मान प्राप्त भए पनि आतिथ्य खर्चिलो बन्नेछ। अर्थअभावले सताउन सक्छ। लोकाचारका लागि भोगविलासका वस्तु जुटाउनुपर्ला। यात्राको प्रक्रियाले खर्च बढाउन सक्छ। आफन्तबीच आत्मीयतामा कमी आउनेछ। वादविवादले घर-गृहस्थीमा समस्या निम्त्याउन सक्छ। नयाँ परिवेशमा पुगिए पनि मनमा दुविधा कायम रहनेछ। दिगो काम थाल्न सकिनेछ। Nepalipatro
Previous संसद भवन अगाडि आन्दोलन चर्कियो, विद्यार्थी घाइते
Next प्रचण्ड नेपाल निर्वाचन आयोगमा